Madaxweynaha Maamulka 'HirShabelle' oo si Dirqi ah Uga Badbaaday Weerar Lagula Beegsaday Magaalada Jowhar.
Khasaara xooggan ayaa ka dhashay weerar lagu qaaday xarunta madaxtooyada maamulka isku magacaabay Hirshabelle ee magaalada Jowhar.
Wararka ka imaanaya gobolka Sh.dhexe ayaa sheegaya in xalay qaraxyo laga maqlay dhismaha xarunta madaxtooyada magaalada Jowhar oo xiligaas ay ku sugnaayeen mas’uuliyiin katirsan DF-ka iyo saraakiil AMISOM ah.
Goob Joogayaal ku sugan magaalada Jowhar ayaa sheegay in ay maqleen jugta qarax xooggan oo gilgilay dhismaha Madaxtooyada kadibna waxaa xigay rasaas xooggan oo ay furayeen ciidamadii ilaalada ka ahaa dhismaha la weeraray.
Cali Cabdullaahi Cosoble hoggaamiyaha maamulka Hirshabelle ayaa la xaqiijiyay in uu si dirqi ah uga badbaaday weerarka, ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in laba qarax lamaqlay balse qaraxa ugu xooggan wuxuu ka dhacay gudaha madaxtooyada.
War kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in ay weerareen goob ay ku sugnaayeen mas’uuliyiin katirsan maamulka Hirshabelle iyo saraakiil AMISOM katirsan.
Warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in saraakiil katirsan maamulka Hirshabelle iyo ciidamo isugu jiro AMISOM iyo kuwa Soomaali ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarkii ka dhacay Madaxtooyada magaalada Jowhar.